Alahady 05 Septambra 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
Publié le 6 septembre 2021 6 septembre 2021 par Hanitra ROBEL
Alahady 05 Septambra 2021
ALAHADY 5 SEPTAMBRA 2021
“MIORENA AO AMIN’NY TOMPO AO AMIN’NY BATISA”
ALAHADY HITONDRANA AM-BAVAKA
NY SAMPANA TANORA KRISTIANA ZOKINY (STK Zo)
Alahady faha XIV manaraka ny Trinité ity alahady ity ary alahady voalohany amin’ny volana septambra hibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy eo amin’ny sahan’ny FJKM, hoe « Miorena ao amin’ny Tompo ao amin’ny Batisa ».
Alahady miavaka, nitondrana am-bavaka ny Sampana Tanora Kristiana Zokiny ary koa Fivoriamben’ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo.
Ny Mpitandrina Ramilison Diamondra no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatra.
Litorjia endriny voalohany no notanterahina.
Nanomboka tamin’ny 9 ora ny fanompoam-pivavahana.
Nianatra ny Hira Fanevan’ny faha 160 taonan’ny Fiangonana nialoha ny nanombohana ny fotoana ny mpiangona.
Nitsangana dia niara-niredonina ny Hira Fanevan’ny faha 160 taonan’ny Fiangonana teo am-panombohana.
Taorian’ny Fiarahabana Apostolika dia niaraka novakian’ny Fiangonana, teo am-pitsanganana, ny Salamo 108: 1-5 ho fiderana an’Andriamanitra ary natao ny hira FFPM 7 « Misaora an’Andriamanitra ».
Nanao ny vavaka fiderana ny Mpitandrina nitarika ny fotoana.
Nankalaza an’Andriamanitra. Nisaotra Azy nanaiky nandray teo amin’ny Tranony. Nangataka mba hanokafan’ny tsirairay ny fony ary samy hanambara fiderana ny vavany. Andriamanitra dia tsara, Andriamanitra dia Fitiavana, Andriamanitra dia Masina. Misaotra Azy noho ny fahasoavana, ny tombon’andro sy nv volana vaovao. Misaotra noho ny Sampana Tanora Kristiana Zokiny izay miaraka mankalaza sy midera an’Andrimanitra amin’ity alahady ivom-bokatra ity. Mangataka ny Fanahy Masina hitarika mandritra ny fotoana rehetra mba ho voninahitr’Andriamanitra. Mba ho olona navaozina sy nampiorenina anie aorian’ny fanompoam-pivavavahana.
Nofidian’ny Mpitandrina ny Teny ao amin’ny 1 Jaona 3 : 3 ; 9 ho fanambarana ny sitrapon’Andriamanitra.
« Izay rehetra naterak’ Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy, satria naterak’ Andriamanitra. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina aminy izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka Azy »
Natao ny hira FFPM 752: 1-5 « O, ry Jesosy ny Anaranao ».
Raha mandini-tena manoloana izany Sitrapon’Andriamanitra izany dia mifona sy mibebaka eo anatrehan’ny Tompo.
Mivavaka noho ny Teny izay mitaona ny hifona sy hibebaka. Ireo izay naterak’Andriamanitra no tsy manota ary tsy mahay manota ary amin’izany dia tonga manadio ny tenanay ho tahaka an’i Jesoa Kristy tsy mba nanana ota.
Raha ny marina dia tokony ho efanay izany satria ny vita Batisa no voadio sy voasasa. Tsy tanteraka anefa izany satria mahatsapa fa tsy miorina amin’ny alalan’ny Batisa, matoa mbola manota ihany. Ireo toetra sy fomba hafa mbola nentina nandikana ny Sitrapon’Andriamanitra, izay maha be ny alahelony koa mifona satria tsy nandeha ho mendriky ny Filazantsara.
Raha miaiky ny fahotanay izahay dia mahatoky sy marina Ianao ka mamela ny fahotanay ary manadio anay ho afaka amin’ny tsy fahamarinanay rehetra.
Misaotra noho Jesoa mifona eo ankavan’Andriamanitra.
Rehefa vita ny vavaka dia natao ny hira FFPM 408 : 1-5 « Jehovah, Ray mahari-po »
Andriamanitra dia mamindra fo sy miantra.
1 Jaona 1 : 9 ; 2 Korintiana 5 : 21 ; Matio 8 : 3b
Ireo no Teny famelan-keloka atolotr’Andriamanitra, noraisina teo am-pitsanganana. Rehefa avy nandray ny Teny famelan-keloka dia natao teo am-pitsanganana ihany ny hira FFPM 351: 2 « Voninahi-panjakana isaloranao ». Avy eo dia niara-nanonona ny Fanekem-pinoana apostolika.
Nipetraka nanao vavaka mangina, narahina feon-javamaneno fohy izany
Rafidison Hanitra, mpampianatra ao amin’ny K6, no nanatanteraka izany.
Nitsangana, ary ny Tenin’Andriamanitra noraisiny nitondrany fampianarana dia tao amin’ny Lioka 20: 17 « Ny vato izay nolavin’ny mpanao trano, Dia izy no efa natao fehizoro ». Niara-novakiana izany Teny izany. Andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Salamo 118: 22 koa io. Eto dia Jesoa mihitsy no manambara izany.
Tantara: Nisy misionera nanatanteraka iraka tany amin’ny faritra atsimon’ny Nosy. Gaga izy nahita olona maro nangataka hatao Batisa. Isan’izany, tovolahy iray teo amin’ny 15 taona teo ho eo. Nieritreritra ilay misionera fa mety tsy mazava tsara amin’io tovolahy io ny dikan’ny Batisa, ka mety hiova hevitra izy, ka hanimba ny fandrosoan’ny asa fitoriana izany. Ka hoy izy hoe: “Mbola hiverana aho afaka enim-bolana ka raha tsy miova ilay tovolahy fa tena tapa-kevitra, izay vao hatao Batisa”. Taitra ny olona ary nanambara fa io tovolahy io no nampianatra ka nampandresy lahatra azy ireo ny amin’ny Batisa.
Lesona telo no tsoahina amin’izany:
Jesoa no vato fehizoro hiorenanan’ny finoantsika izay aseho antsika amin’ny alalan’ny Batisa
Ny fihevitr’Andriamanitra dia tsy fihevitr’olombelona.
Ianao ilay mahatsiaro voahilika, voatositosika eo amin’ny sehatra maro. Aza mijery ny tenanao amin’ny fomba fijerin’ny olona fa amin’ny fijerin’Andriamanitra.
Ny hira FF 3:1 « Jeso vato fehizoro » no natao teo am-pitsanganana, ho solom-bavaka.
TATITR’ASAN’NY SAMPANA STK Zo
Rakotoarimanitra Narindra, mpitantsoratry ny Sampana, no nanao ny tatitr’Asa.
«Miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin’ ny asan’ ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ ny Tompo. » 1Korintiana 15:58;
« Mazotoa, fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin’ ny fanompoana ny Tompo». Romana 12:11
Ny Asa notanterahin’ny Sampana ny 12 oktobra 2020 hatramin’izao faha 05 septambra 2021 no notaterina. Na teo ary ny zavatra nitranga eran’izao tontolo izao, indrindra ny amin’ny Covid19 dia nanatontosa ny Asany ny STKZo. Ny STKZo dia mijoro sy miasa, mandray anjara feno amin’ny hetsika rehetra entina hampandrosoana ny Fanjakan’Andriamanitra.
Rehefa vita ny tatitr’Asa dia nitsangana nanao ny hira « Andriamanitra, eh mahagaga » ny Sampana.
Rakotomanana Andry, Mpitantsoratra, no nilaza ny raharaham-piangonana.
Ireto manaraka ireto ny vaovao nisongadina tsara ho fantarina:
.Oniversite Ravelojaona: Fisokafan’ny taom-pianarana 2021-2022.
.AFF: 23-26: septambra ny Fihaonambe any Manakara
.Tafaverina soa aman-tsara, avy nanatrika ny Synoda Lehibe tany Sambava sy niala sasatra, ny Mpitandrina mivady;
.Tanterahina ity alahady ity ny Fivoriambe ny mpandray ny Fanasan’ny Tompo
.Tontosa ny sabotsy 4 septambra ny hetsika “tournoi 160e”. Tena vory maro ny nanatrika sy mpandray anjara. Misaotra manokana ny tanora.
.Hetsika fanaovam-baksiny ny tolakandron’ny alahady 5 septambra manomboka amin’ny iray ora sy sasany. Hetsika karakarain’ny K160.
.24-25 septambra: Fisintonan’ny Katekomena
.26 septambra: Fahalalana Soratra Masina
.Fampahalalan’ny Biraom-piangonana noho ny fahataperan’ny hamehana ara-pasalamana. Miverina tsikelikely ny fiainam-piangonana:
Manomboka amin’ny 6ora sy fahefana ny fanompoam-pivavahana zoma hariva
Ho tanterahina any an-tokantrano ny famangiana fahoriana sy fampaherezana ny fianakaviana
Tsy voafetra intsony ny isan’ny olona mivory saingy entanina ny fanohizana ny fitandroana ny fahasalamana.
Nandray fitenenana ny Mpitandrina:
Nanamafy fa hitohy ny fampandraisana an-trano.
FIARAHABANA IREO NAHATRATRA NY TSINGERIN’ANDRO NAHATERAHANY
Nasain’ny Mpitandrina nitsangana ireo rehetra teraka volana aogositra ary natolotra azy ireo ny Tenin’ny Soratra Masina: « Ampy ho anao ny fahasoavako » (2 Korintiana 12: 9) izay Tenin’i Jesoa tamin’ny apostoly Paoly. Natao ny vavaka.
Natao ny hira HF 12 « Feno toky » mandritra ny nanaovan’izy ireo Fanati-mpisaorana teny amin’ny alitara.
Nitotaly 41 ny isan’izy ireo.
Ralaindimby Haja, Mpitantsoratry ny volam-piangonana, no namaky ireo voady sy raki-pisaorana.
Ireo hira nangatahan’ny nanao voady sy raki-pisaorana: FF 34, FFPM170:2, FFPM 531:1.
Ny hira HF 12 dia notanterahina tamin’ny rakitra “anniversaire”.
Ny hira FFPM 276: 3 « O! mba raiso re, ry Tompo » no hira vavaka natao teo am-pitsanganana ho fanavaozana ny fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra. Nofaranana tamin’ny “Amena”.
Natao avy hatrany ny hira FFPM 146: 1-2 « Anao ny dera, ry Zanaky ny Ray ».
Nanolotra ny Perikopa ho vakiana Randriamampianina Andrianjaka ary nivavaka nangataka ny Fanahy Masina mialoha ny famakiana ny Soratra Masina izay nofandimbiasany tamin-dRamiadamanana Josiane. Samy Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Vola ireo tompon’anjara ireo.
Ny perikopa: Genesisy 17: 9 – 14; Lioka 3:21-22; Asan’ny Apostoly 10: 44-48.
Natao ny hira FFPM 36: 3 « Hoderaina lalandava ny Anaranao » mialoha ny toriteny.
Miditra amin’ny lohahevitra fitaizam-panahy vaovao indray isika:
Ny Teny nakana hafatra, nandraisana izany fitaizam-panahy izany dia ny Asan’ny Apostoly 10:44b izay manao hoe, amin’ny anaran’ny Tompo: “dia nilatsaka tamin’ izay rehetra nandre ny Teny ny Fanahy Masina.”
Natokan’ny Fiangonana ho Fivoriamben’ny Mpandray ny androany ary Ivom-bokatry ny STK Zo. Fa ho an’ny Fiangonana rehetra ihany koa izany Teny izany, satria ny fientanana hiorina ao amin’ny Tompo amin’ny Batisa, dia ho an’ny tsirairay.
Ny Batisa dia ny Sakramenta voalohany ao amin’ny Fiangonana FJKM. Io no hanoloran’Andriamanitra ny fahasoavany tsy hita maso, amin’ny alalan’ny famantarana hita maso.
Ny rano dia manana ny heviny: Fidiovana na fanadiovana; fisasana na fanasana izay maloto. Izany no Batisa (fidiovana/fanadiovana; fisasana/fanasana).
Maro ny fahasoavana atolotr’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Sakramentan’ny Batisa. Santionany amin’izany ny famelan-keloka, ny fanomezana Fanahy Masina, ny fitafiana an’i Kristy ary koa ny Famonjena. Hita izany ao amin’ny Asan’ny Apostoly 2:38, Galatiana 3:26-29, 1 Petera 3:21.
Inona no vokatr’izany?
Miasa ao anatin’ny fanompoam-pivavahana tanterahin’ny mino ny Fanahy Masina
Izay mandray an’i Jesoa dia nomena hery ho tonga zanak’Andriamanitra
Porofo nanalana ny ahiahin’ny Jiosy io nandraisan’ny jentilisa ny Fanahy Masina io.
Tao an-tokatranon’i Kornelio no niseho ny tantara. Petera nitoriteny tao amin’ny tokantrano jentilisa.
Nandray ny Fanahy Masina izay niangona teo. Tena zava-dehibe ny fanatanterahana fanompoam-pivavahana
Nahazo ny vokatry ny fiasan’ny Fanahy Masina izy
Ireo tsy nahay nankalaza an’Andriamanitra dia tonga nankalaza fatratra tokoa an’Andriamanitra.
Ny asan’ny Fanahy dia mampiombona sy mampiray. Mamokatra fahasoavana ao amin’ny olona.
Maro ny fisehoan’ny asan’ny Fanahy. Ny mihira (hiran’ny STK Zo) manentana, mampahery ny olona manome risi-po. Ny fitiavana an’Andriamanitra no fanomezam-pahasoavana ambony indrindra. Ny fivelaran’ny fifankatiavana no hisehoan’ny Fanahy Masina (« Amparibe Famonjena: Mahatahiry ny finoana, Mifankatia, Miasa amin’ny fahazotoana »).
Jaona 1: 12 « Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’ Andriamanitra, dia izay mino ny anarany » Ny rehetra mihitsy. Tsy ho an’ny Jisoy ihany ny famonjena fa ho an’ny jentilisa koa. Manana anjara amin’izany isika.
Ny rehetra dia tonga mpisorona mifandray mivantana amin’Andriamanitra Aseho fa mitovy eo anatrehan’Andriamanitra ny rehetra. Tsy misy kely sy lehibe. Fandaminana sisa no atao ao am-piangonana mba hisian’ny filaminana.
Genesisy 17: io no nanehoana ny fanekena sy ny famorana hanekena ny taranak’i Abrahama. Fanekena vaovao ny Batisa. Hita ao amin’ny Kolosiana 2:11-12 ny firesahana momba izany. Zava-dehibe eo amin’ny fiainana ny atao Batisa, ny vita Batisa, ny hanolorana ny zanaka an’Andriamanitra.
Porofo nanalana ny ahiahy ny Jiosy io, nandraisan’ny jentilisa ny Fanahy Masina io
Ny finoana dia tsy an’ny Jiosy ihany fa an’ny Jentilisa ihany koa.
Ilay fanomezana tsy hita maso (Fanahy Masina) efa azo koa inona no tsy hanaovana Batisa (hita maso)
-ny mino ny Filazantsara no mandray ny Fanahy Masina ary tonga zanak’ Andriamanitra
-ny fananana ny Fanahy Masina no maha zanak’Andriamanitra
Dieny mbola zaza dia atolory an’Andriamanitra, fa aza avela efa noviravirain’ny devoly vao atolotra an’Andriamanitra.
-Rehefa vita Batisa vao an’i Kristy. Ny fanolorana ny zanaka dia fiomanana ho an’ny Batisa
Jesoa raha natao Batisa ka nandray ny Fanahy Masina dia nahare feo sy nahita i Jaona
Miorena tsara ao amin’ny Tompo ianao rehefa vita Batisa, manana ny Fanahy Masin’Andriamanitra
Feon-javamaneno fohy taorian’ny toriteny, avy eo dia nanao ny anjara hirany ny Antoko Mpihira Hasin’ny Famonjena.
Ny Mpitandrina Ramilison Diamondra, izay nitarika ny fotoana ihany, no nanao ny vavaka.
Misaotra noho ny asan’ny fahasoavana ao amin’ny Fiangonana ka afaka nisaotra tamin’ny alalan’ny raki-pisaorana.
Misaotra nanome ny STKZo, mangataka mba ho feno fahamasinana izy ireo hanaovany asa mampamirapiratra ny voninahitr’Andriamanitra, ka ho tanteraka ny Teny Fanevan’ny Sampana.
Mivavaka ho an’ireo SSA rehetra mijoro eto amin’ny Fitandremana, ho an’ireo rafitra manao fankalazana. Mangataka mba ho an’ny olona rehetra ny famonjena. Maniry mba hisy vokatra tokoa ny asan’ny Fanahy Masina.
Mivavaka mba hampaherezina ireo ray aman-dreny mbola malaina hanolotra ny zanany amin’ny Batisa. Mivavaka ho an’ny Asa fitoriana, Asa fanamboarana isan-karazany. Mivavaka ho an’ny marary hahazo hery sy fahasitranana. Mivavaka koa ho an’ireo tra-pahoriana mba ho tolorana ny fampaherezana, mivavaka ho an’ireo sahirana amin’ny lafiny maro, ho an’ireo kere, ho an’ny fandriampahalemana.
Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo niara-notononina izany. Ary nisy feon-javamena fohy.
Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 534: 1-3 « Misy didy tena tsara » ary novakiana ny tondrozotra 2021.
Notohizana ny hira FFPM 534: 4 « Jesoa no Ilay foto-kazo », nofaranana tamin’ny Amena nohiraina.
Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina.
Ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra!
Feon-javamaneno teo am-piravana
Natao ny Fivoriamben’ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo teo am-panombohana, notarihan’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina.
Fotoana miavaka, nanaovana dinika momba ny adidy. Manomboka hiverina amin’ny laoniny ny fiainana koa mila fanentanana sy fampirisihina.
Ny karazana adidy dia 2 : anatiny (entina mampandroso ny asam-piangonana), ivelany (ao am SP sy FJKM)
« ny adidy tsy an’olon-dratsy » hoy ny Malagasy.
Izay no hanentanana hoe : Efao ny voadinao
« Amparibe Famonjena tsy mandà adidy, tsy mandositra adidy fa manefa “adidy ».
Nitohy tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo avy eo.
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina sy Ramilison Diamondra no nanantanteraka izany
Natao ny hira FF 33: 1 « Inty aho Jesoa » teo am-piomanana.
Novakiana ny Soratra Masina, natao teo am-pitsanganana ny vavaka fanandratana ary ny hira fihobiana Antema 1 « Masina, Masina ».
Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana: FFPM 184, FFPM 599, FFPM 499.
Natao ny vavaka. Notantazana ny Raki-pisaorana sy nangonina ny kapoaka tao anatin’ny hira FFPM 356.
« Ary amin’ izany, ry rahalahy sady malalako no mahamanina ahy, fifaliako sy satro-boninahitro, tomoera tsara ao amin’ ny Tompo hianareo, ry malalako. » Filipiana 4:1.
Natolotra ny Tsodarano ary natao ny hira FFPM 699:1 « Midera anao ny olo-masina ».
Feon-javamaneno teo am-piravana.
Nikirakira ny fafana : Rakotonarivo Vatsy
Nikirakira ny fanamafisam-peo: Harentsoa Rova
Naka ny sary : Raharijaona Solofonirina
Nitendry orga: Rajaofetra John
Article précédentPrécédent Alahady 30 aogositra 2021
Article suivantSuivant Alahady 12 Septambra 2021
Alahady 05 Desambra 2021
Alahady 07 Novambra 2021